Trano mpamokatra: tafatsangana ny « Metatron production » | NewsMada
Trano mpamokatra: tafatsangana ny « Metatron production »
Par Taratra sur 29/09/2018
Nampahafantarina, omaly teny Ankatso, ny fitsanganan’ny trano mpamokatra « Metatron production », hiasa eo amin’ny sehatry ny kolontsaina sy ny serasera. Tafiditra ao anatin’izany ny famokarana rakitsary, horonantsary, rindrantsary, rakipeo, sns… Nampahafantarina tamin’io fotoana io koa ny hidirany sahady eo amin’ny famokarana sarimihetsika. Nanao antso ho an’ny rehetra te handray anjara amin’ny fifantenana mpilalao avy hatrany izy ireo. Hetsika atao ao amin’ny Tranompokonolona Mahitsy ny 7 oktobra sy ny 8 oktobra izao. “Ireo tsy mbola nisehatra mihitsy no tena ilaina amin’io ary tsy anavahana sokajin-taona na fihaviana, ho famahoahana ny tontolon’ny sarimihetsika”, araka ny fanazavan-dRafanolalaharisoa Nathy, mpiara-mitantana ny trano mpamokarana Metatron production.
Ankoatra io fandraisana mpilalao “zazavao” io, aim-baovao hoentin’ity trano mpamokatra ity eo amin’ny zavakanto mifandraika amin’ny fifandraisana sy ny serasera ary ny fialamboly ny fanavaozana hapetrany eo amin’ny lafiny teknika mikasika ny firaketana an-tsary sy ny fandraisam-peo ary ny famoronana tantara.
“Ny zava-bitan’ireo zoky teo aloha hatrany no hatao lesona hoenti-manatsara”, hoy Rakotondranaly Maminiaina Johnny, tompo-marika amin’ity tetikasa ity. Niniana napetraka ivelan’ny Renivohitra ny orinasa hanapariahana ny fahaiza-manao sy ny tombontsoa azo avy amin’ny fisiany ho fampivelarana ny fampandrosoana amin’ny faritra tsy an-tanàn-dehibe, raha ny fanazavany.